Malaysia: Ma jin bay aragtay gabadhii qeyladeeda ay ardayda ka argagaxeen? | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
ARIMAHA BULSHADA Malaysia: Ma jin bay aragtay gabadhii qeyladeeda ay ardayda ka argagaxeen?
Malaysia: Ma jin bay aragtay gabadhii qeyladeeda ay ardayda ka argagaxeen?
Xilli ay ahayd subax jimco ah oo uu jawigu daggan yahay, bishii Luulyo ee lasoo dhaafay, ayaa mar qura qeylo argagax leh laga maqlay Iskuul ku yaalla Waqooyiga-Bari ee dalka Malaysia. Ardaydii oo dhan ayaa wad cabsaday, qofka sidaas u qeyliyayna waxay hayd gabar ka mid ahayd rdayda oo lagu magacaabo Siti Nurannisaa, taasoo 17 jir ah.
Qofna ma uusn graneynin wixii ay markaas aragtay, ilaa ay goor dambe ka sheekeysay dhacdada.
Cid taqaanna sababta ma jirto, balse tani waa arrin si weyn looga yaqaanno waddankaas, waxaana marar badan qeyladaas argagxa leh laga maqlaa gabdhah ardayda ah ee dalka Malaysia.
Marka gabadhaha la wareysto waxay sheegaan inay arkeen wax ay ku tilmaameen Jin ama Sheydaan, hase yeeshee, dadka kale ee u dhow waxaas ma arkaan.
Siti waxay ka sheekeyneysaa sidii ay wax u dhaceen
Waaxaa dhawaaqay gambaleelka iskoolka
Waxaan fadhiyay kursigeyga, waxaana dareemayay hurdo balse mar qura waxaan ka war helay wax aan fileyn oo garbaheyga iga taabtay
Dib ayaan u milicsaday, si aan u eego waxa uu yahay, balse qolkii aan ku jiray ayaa mugdi noqday
Waan cabsaday, waxaana xanuun ka dareemay dhabarkeyga, madaxii ayaa i wareegay, waxaana ku dhacay sagxadda fasalka
kahor inta aanan ogaan, waxaan galay xaalad kale oo waxaan arkay dhiig, buuq iyo meel uu dhiig ku daatay
Wixii iigu naxdinta badnaa ee aan arkay waxay ahayd waji sheydaan oo aan ka argagaxay
Wuu igu qeyliyay, mana ka baxsan karin, afka ayaan kala qaaday, waxaana isku dayay in aan qeyliyo, balse way igu adkaatay.
Buuqii ka soo yeeray fasalkii ay ku jirtay gabadha ayaa qabsaday iskoolka dhan, waxaana daqiiqado gudahood qeylo isku daray ardaydii kale ee ku sugnaa fasalladii kale.
Mid ka mid ah gabdhaha ayaa suuxday, ka dib markii ay sheegtay inay aragtay wax madow oo ay ka cabsatay.
Lahaanshaha sawirkaJOSHUA PAUL FOR THE BBC
Albaabbada dugsiga sare ee Ketereh ayaa xirmay, waxaana cabsi ay soo wajahday ardaydi iyo dhammaan macallimiintii, waxaana ardaydii ay hoos isaga soo xireen qolalka. Culimo diinta Islaamka taqaanna ayaa loo yeeray, si ay Qu’raan ugu akhriyaan iskuulka.
Isku dhex yaac dhanka maskaxda ah ama waalli daran ayaa ku dhashay arday badan oo ka mid ah kuwii dhiganayay iskuulka, taas oo la sheegay inay ka qaadeen wixii ay ku arkeen fasalka.
“Waa dhibaato maskaxeed oo aan kala sooc lahayn, taasi oo ka dhalatay dareen ba’an oo ay qaadeen neerfaha qofka”, sidaas waxaa yiri khabiir ku takhasusay xanuunnada dhimirka oo u dhashay dalka Mareykanka.
Isku dhexyaacan aadka u daran ayaanan aad loo fahamsaneyn kumana jiro liiska xanuunnada dhimirka. Balse dhaqaatiirta ku xeel dheer xanuunnada maskaxda, sida Dr Simon Wessely ayaa sheegay in calaamadaha qofka lagu arkayo ay ka mid yihiin suuxdin, gariir, madax xanuun iyo labbalabbo.
Meelo kala duwna oo dunida ah ayaa laga soo sheegay xanuunkan beri hore. Dhacdooyinka Malaysia ayaa gaar ahaan ku badnaa shaqaalaha warshadaha sanadihii 1960-meeyadii. Maanta waxay aad u saameysaa carruurta dhigata iskuullada.
Image captionMid ka mid ah masaajidda Ketereh
Robert Bartholomew wuxuu waqti badan ku bixiyay baaritaanka dhacdooyinka Malaysia. Wuxuu dalkaasi ku yaalla Koofur Bari Aasiya ugu yeeray “caasimadda isku dhex yaaca maskaxda ee baaxadda leh uu ka jiro dunida”.
“Waa dal ay dadkiisu yihiin dad diimeed, iyadoo dad badan, gaar ahaan kuwa miyiga ku nool ay aaminsan yihiin dhaqamo iyo waxyaabo mala-awaal ah.”
Balse arrinta ku saabsan isku dhex yaaca maskaxda ayaa ah mid xasaasi ah. Dalka Malaysia, waxaa aad ugu badan kiisaska la xiriira gabdhaha yaryar ee ka soo jeeda qowmiyadda Muslimiinta ee Malay ee dalkaasi ugu tirada badan.
Xaafadda Padang Lembek oo ay ku hareereysan yihiin beero uu bariis ka baxo waxay ku taallaa duleedka mgaaladaKelantan ee caasimadda u ah gobolka Kota Bharu.
Halkaas waxaa ku nool qowmiyad yar, dadkuna way is wada yaqaannaan. Waxaa ku yaalla makhaayado ay qoysas leeyihiin, koofeerro, masaajid iyo iskuullo fiican.
Image captionQoyska Siti oo ku sugan gurigooda oo ku yaalla Padang Lembek
Siti iyo qoyskeeda waxay ku nool yihiin guri hal dabaq ah oo casri ah, kaasoo si fudud loogu aqoonsan karo rinjiga guduudan ee marsan saqafka guriga iyo midabka cagaaran ee la mariyay derbiyada. Waxaa hor taalla mooto duug ah oo ay isla isticmaalaan saaxiibaddeed Rusydiah Roslan, oo ku nool meel u dhow.
Sida dhalinta kale ee da`deeda ah, walwal dhinac maskaxda ah ayaa saameyn ku yeeshay Siti. Waxay sheegtay in dhibatadaas inteeda badan ay dareentay sanadkeedii ugu dambeeyay ee iskuulka, oo ah 2018-kii, markaasoo dhammaan imtixaanaadkii muhiimka ahaa ay ku guul darreysatay.
“Toddobaadyo ayaan isku diyaarinayay, anigoo isku dayaya inaan xifdiyo balse wax baa khaldanaa,” ayay tiri. “Waxaan dareemay inaysan waxna madaxayga geleynin.”
Dhacdadaas iskuulka ka dhacday bishii Luulyo ayaa Siti ka dhigtay mid aan awoodin inay seexato amaba ay si fiican wax u cunto. Waxay ku qaadatay bil si ay u nasato oo ay caadi ugu soo laabato.
Isku dhex yaacan wuxuu ku billowdaa hal qof, ka dibna wuu sii faafaa sida ay khubaradu sheegeen.
Tani waa sheekada Siti.
“Arrintan iskama timaaddo,” ayuu yiri Robert Bartholomew. “Waxay ku billaabataa hal cunug ka dibna si degdeg ah ayay ugu faaftaa kuwa kale, sababtoo ah waxay ku dhex jiraan deegaan uu isku buuq ka jiro.”
Waxaa laga yaabaa in qofku uu arko saaxiibkii iskuulka ay wada dhiganayeen oo suuxay, ka dibna ay taasi saameyn ku yeelato isaga.
Image captionSiti ayaa waxa ay aragtay la barbar dhigeysa awoodo kale iyadoo ay indhaheeda xiran yihiin
Rusydiah Roslan weligeed ma illaawi doonto in saaxiibbaddeed ay ku aragto xaaladdaas. “Siti way cabaadeysay si aan xad lahayn,” ayay tiri. “Qofna ma uusan aqoon wax uu sameeyo. Waan ka baqeynay xitaa inaan taabanno.”
Gabdhuhu way isku dhowaayeen balse wixii dhacay sanadkii hore ayaa xiriirkooda sii xoojiyay.
Image caption“Saynisku si buuxda uma sharrixi karo awoodaha sare,” ayuu yiri Zaki Ya
Nin lagu magacaabo Zaki Ya, ayaan ku booqannay xaruntiisa ku taalla Ketereh, wuxuu nagu salaamay dhoolla-caddeyn. “Apa khabar, sidee tahay?”
Wuxuu ku dhaqmaa Qur`aanka, wuxuuna aaminsan yahay awoodda jinka.
“Waxaan dunida la wadaagnaa waxyaabahaas aanan la arkeynin, ” Zaki Ya ayaa yiri. “Way fiican yihiin ama way xun yihiin waxaana looga adkaan karaa iimaanka.”
Image captionWaxyaabo “la habaaray” ayaa dul saaran miiska xarunta Zaki Ya
Xarunta waxaa yaalla waxyaabo ay ka mid yihiin mindiyo duug ah, shanlo iyo waxyaabo kale oo uu Zaki sheegay inay yihiin kuwo aan la taaban karin.
Zaki Ya wuxuu la kulmay Siti Nurannisaa iyo qoyskeeda sanadkii 2018-kii. “Waan gacan qabtay Siti wayna soo roonaaneysay,” ayuu yiri.
Daqiiqado ka dib markii aan xaruntiisa tagnay, Zaki Ya ayaa soo galay qolka, wuxuuna u yimid gabar murugeysan. Madaxa ayuu ka qabtay wuxuuna ku aqriyay aayado Qur`aan ah, waxayna u muuqatay inay ku degtay.
Wuxuu sheegay in haweenku ay jir ahaan daciif yihiin ayna jilicsan yihiin, sidaas daraaddeedna ay u nugul yihiin jinka.
Wuxuu qirsan yahay in caafimaadka maskaxda uu door weyn ka qaato kiisas badan oo uu arkay, balse wuxuu xoogga saaraa awoodda Jinka.
Image captionQalab “looga hortago isku dhex yaaca” qiimihiisuna waa $2000
Arrin kale oo lagu muransan yahay ayaa waxaa la yimid koox culumo Muslimiin ah oo ku sugan Pahang.
Waxay keeneen qalab looga hortagayo isku dhex yaaca maskaxda oo qiimihiisu yahay 8,750 oo lacagta Malaysia ah una dhiganta (£1,700 oo gini ama $2,100 oo doolar).
Image captionUlo alwaax ka sameysan oo qofka uu jinku galay dareensiinaya xanuun kana saaraya
Dr Mahyuddin Ismail, oo qalabkan soo saaray ayaa sheegay sida uu ka so xigtay Qur`aanka in qalabkan uu ka baqo jinka. Wuxuu sheegay in qalabkaas ay isticmaalaan iskuullo laguna daweeyay dad 100 qof ka badan.
Image captionDr Mahyuddin Ismail oo ku sugan bannaanka xafiiskiisa Universiti Malaysia ee Pahang
Qalabkan ayaa markii la soo saaray sanadkii 2016-kii waxaa cambaareeyay wasiir hore oo lagu magacaabo Khairy Jamaluddin, wuxuuna sheegay in bulshada Malaysia ay tahay inay iska daayaan waxyaabihii laga tagay, ayna noqdaan kuwo cilmiga sayniska wax ka fahma.
Image captionMagaalada Kota Bharu
Diinta iyo aaminaadda awoodaha kale sida jinka ma la isku xiri karaa?
Afiq Noor ayaa ku doodaya inay tahay in shareecada Islaamka laga hirgeliyo iskuullada ku yaalla gobollada sida Kelantan ee lala xiriiriyay arimahaas.
“Gabdhaha Muslimiinta ee ka soo jeeda qowmiyadda Malay waxay dhigtaan iskuullo diinta aad loogu dhaqmo,” ayuu yiri. “Waxay xirtaan dhar loogu talo galay mana dhegeysan karaan muusigga, maadaama uusan Islaamku oggoleyn.”
Sanadkii 2019-kii, wuxuu Siti Nurannisaa u ahaa mid deggan.
“Waan fiicnaa. Wuxuu ii ahaa sanad deggan,” ayay tiri. “Wax xun ma arkin hadda intii bilooyin ah.”
Waxay kala go’een qaar badan oo ka mid ah saaxiibbadeed ka dib markii ay ka qalin jebisay Iskuulka SMK Ketereh, balse taasi dhib kuma qabto – sida ay sheegtay, waxay la xiriirtaa tiro yar oo saaxiibbo ah.
Waxay haatan ka nasaneysaa waxbarashada kahor inta aysan gelin jaamacad.
Image captionSiti iyo bisaddeeda
Maalintii aan kulannay, waxay i tusisay makarafoon madow oo dhalaalaya, kaasoo ay magaciisa u tqaanno.
“Karaoke wuxuu ii ahaa wax aan jeclahay,”ayay tiri. Heesaha fannaanadda reer Malaysia ee Katy Perry ayey Siti Nurhaliza aad uga heshaa.
Heesidda ayaa la xaqiijiyay inay gabadhaasi u ahayd mid ay isku buuqa kaga nafisto. Waxay ka caawisay inay mar kale hanato kalsoonideeda ka dib dhacdadii argagaxa lahayd.
Image captionSiti iyo aabbahed Azam Yacob, oo gurigooda ku sugan
Waxay Siti dooneysaa inay mustaqbalka noqoto askari, waxayna ku dooratay sida ay sheegtay inay askartu yihiin geesiyaal aan waxba ka cabsan.
Previous articleBANAADIR uma baahna guddoomiye lagu adeegto ee adeege isu adeege ah
Next articleMaxamed: Dadkii doonta tahriibka ila saarnaa oo dhan kaligey ayaa ka badbaaday
Sawirro:Madaxweynaha Puntland oo Kulan La Qaatay Masuuliyiin ka Socotay UNSOM iyo IGAD.
XOG: Khilaafkii QM iyo Villa Somalia oo Maanta la Xalinayo iyo Ceyrintii Haysom oo….
Dhageyso:-Saraakiisha Ciidamada Xoogga Dalka Oo Ku Dhawaaqay Howlgal Laga Fulinayo Gobolka Baay
DAAWO:Hadalka xildhibaan Fiqi ee weerarkii Saxafi oo 3 arrin daah-rogay oo xasaasi ah
Madaxweyne Gaas”Waxaan rajeynayaa in Soomaaliya ay mid noqota”
XOG: MW Farmaajo Oo Go’aan Kama Dambeys Ah Ka Soo Saaraya Xaaladda Dalka & Xiisadaha Taagan
DEG DEG :Madaxweynaha Soomaaliya Oo Gaaray Eritrea “Daawo Sawirro”.
DAAWO: Sarkaalkii ka goostay S.land oo sheegay inuu ciidamo kusoo dhisan doono Puntland Iyo Waxa dhacay…
SAWIRO:-RW Kheyre Oo Ka Qayb-Galay Sanad Guuradii 20-Aad Ee Aas’aaskii Puntland.
Gudoomiyeyaasha Baarlamaanada Galmudug Iyo Hir-Shabelle Oo Natiijadii Shirkii Kismaayo Ku Tilmaamay Riyo…